चीन सौर्य ऊर्जा कनेक्टर निर्माता र आपूर्तिकर्ता - HuaYi-FaDa टेक्नोलोजी
UL वाटरप्रूफ केबल कनेक्टर
वाटरप्रूफ स्क्रू कनेक्टर
वाटरप्रूफ २-वे कनेक्टर
वाटरप्रूफ ३ वे कनेक्टर
वाटरप्रूफ पुरुष महिला कनेक्टर
वाटरप्रूफ गोलाकार कनेक्टर
M14 वाटरप्रूफ कनेक्टर
M16 वाटरप्रूफ कनेक्टर
M19 वाटरप्रूफ कनेक्टर
M21 वाटरप्रूफ कनेक्टर
M26 वाटरप्रूफ कनेक्टर
M40 वाटरप्रूफ कनेक्टर
वाटरप्रूफ केबल कनेक्टर
वाटरप्रूफ एलईडी कनेक्टर
वाटरप्रूफ क्विक डिस्कनेक्ट तार कनेक्टरहरू
द्रुत जडान तार कनेक्टर
वाटरप्रूफ प्यानल माउन्ट कनेक्टर
Rj45 वाटरप्रूफ कनेक्टर
Rj45 प्यानल माउन्ट
Rj45 तार कनेक्टर
वाटरप्रूफ इलेक्ट्रिकल जंक्शन बक्स
वाटरप्रूफ पावर कनेक्टर
M26 वाटरप्रूफ पावर कनेक्टर
सौर्य उर्जा कनेक्टर
घर > उत्पादनहरू > सौर्य उर्जा कनेक्टर
वाटरप्रूफ बल्कहेड कनेक्टरहरू
वाटरप्रूफ प्लग कनेक्टरहरू
वाटरटाइट तार कनेक्टरहरू
टी आकार वाटरप्रूफ कनेक्टर
सौर्य ऊर्जा कनेक्टर
गुणस्तर अनुकूलित MC4 सौर ऊर्जा कनेक्टर चीन मा बनेको! MC4 सबै नयाँ सौर प्यानलहरूमा जडान प्रकारको नाम हो, जसले IP67 वाटरप्रूफ र डस्टप्रुफ सुरक्षित विद्युतीय जडान प्रदान गर्दछ। सौर्य प्यानलबाट सुरक्षित रूपमा बिजुली निकाल्नको लागि MC4 कनेक्टरहरू जोडिएका छन्। अझ प्रभावकारी तरिका भनेको केबल किन्नु हो जसलाई तपाईंले आवश्यक पर्ने लम्बाइमा काट्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि MC4 कनेक्टरहरू जोड्नुहोस्। हामी MC4 जडानकर्ताहरूसँग अनुकूलन कट लम्बाइ केबल प्रस्ताव गर्दछौं।
1. सौर्य ऊर्जा कनेक्टरको परिचय
यो MC4 कनेक्टर उच्च करन्ट र भोल्टेज, रेट गरिएको वर्तमान 30A र 50A, 1KV रेटेड भोल्टेजको साथ सौर्य ऊर्जाको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको खोल प्रयोग गर्दा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विरोधी-ज्वलनशील UL94-V0 नायलॉन PA66 सामग्रीबाट बनेको छ।
2. सौर्य ऊर्जा कनेक्टरको प्यारामिटर
सौर्य ऊर्जाको लागि MC4 कनेक्टर
केबल व्यास दायरा
4.0mm ~ 10.0mm
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A)
अपरेटिङ भोल्टेज (DC.V.rms)
परीक्षण भोल्टेज (DC.V)
टिन-प्लेटिंग संग तामा मिश्र धातु
3. सौर्य ऊर्जा कनेक्टरको सुविधा र अनुप्रयोग
1) एक बहुकार्यात्मक एकीकृत सर्कुलर कनेक्टरमा हाल र सिग्नल प्रसारण एकीकृत गर्दै;
2) नायलॉन फाइबर सामग्रीले उत्पादनको स्थायित्व र सुरक्षालाई धेरै सुधार गर्दछ;
3) निकल प्लेटेड ब्रास पिनहरूले प्रदर्शन स्थिरता र सुरक्षा सञ्चालन सुनिश्चित गर्दछ।
4. सौर्य ऊर्जा कनेक्टरको उत्पादन विवरणहरू
5. ढुवानी र सेवा
1) ढुवानी: साना अर्डरहरू र नमूनाहरूका लागि, हामी DHL, UPS, FedEx वा TNT जस्ता एक्सप्रेस मार्फत पठाउन सुझाव दिन्छौं, जुन पुग्न लगभग 2-7 दिन लाग्नेछ।
ब्याच अर्डर को लागी, यो समुद्र द्वारा जहाज को लागी सस्तो छ।
नि: शुल्क नमूनाहरू उपलब्ध छन्: प्रत्येक भाग नम्बरको 3PCS
डिलिवरी समय: अर्डर पछि 2-3 हप्ता
ग्राहकको आवश्यकता अनुसार OEM, ODM सेवा
६. प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
1) प्रश्न: म तपाईंको कनेक्टरहरूमा रुचि राख्छु, के तपाईंसँग मूल्य सूची छ?
A: हामीसँग सबै कनेक्टरहरूको मूल्य सूची छैन। किनभने हामीसँग धेरै मोडेलहरू छन् र बजारको मागको कारण मूल्य परिवर्तन भइरहन्छ। यदि तपाईंलाई हाम्रो कुनै पनि कनेक्टरहरूको मूल्य चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई तपाईंको आवश्यकताहरू पठाउनुहोस्, हामी उपयुक्त कनेक्टरहरू सिफारिस गर्नेछौं र तदनुसार तपाईंलाई उद्धरण पठाउनेछौं।
2) प्रश्न: तपाइँको भुक्तानी सर्तहरू के हो?
A: 5000 सेट भन्दा कम अर्डर मात्राको लागि अग्रिम T/T पूर्ण भुक्तानी।
अर्डर मात्रा 5000 सेट भन्दा बढीको लागि, T/T 30% निक्षेप रूपमा, र डेलिभरी अघि आराम।
तपाईंले ब्यालेन्स भुक्तान गर्नु अघि हामी तपाईंलाई उत्पादनहरू र प्याकेजहरूको फोटोहरू देखाउनेछौं।
3) प्रश्न: के तपाइँ OEM, ODM परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ?
A: हो निश्चित रूपमा, हामी OEM / ODM सेवा प्रस्ताव गर्न सक्छौं, हामी तपाईंको आवश्यकता वा रेखाचित्र अनुसार कनेक्टरहरू डिजाइन गर्न सक्छौं र तपाईंको लागि नयाँ उपकरण खोल्न सक्छौं।
4) प्रश्न: तपाईंको कारखानाले गुणस्तर कसरी नियन्त्रण गर्छ?
A: हामीले पहिले नै गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीको पूर्ण सेट स्थापना गरिसकेका छौं। हाम्रा सबै उत्पादनहरू दुई पटक वा तीन पटक परीक्षण गरिएको छ र डेलिभरी अघि 100% निरीक्षण गरिएको छ।
5) प्रश्न: के म थप आदेशहरू अघि परीक्षणको लागि केही नमूनाहरू प्राप्त गर्न सक्छु?
A: निश्चित रूपमा, हामी तपाइँको अनुरोध अनुसार नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न खुसी छौं। पुरानो भनाइ अनुसार: हेर्नु भनेको विश्वास गर्नु हो, हामी विश्वास गर्छौं कि तपाईं हाम्रा उत्पादनहरूसँग सन्तुष्ट हुनुहुनेछ।
6) प्रश्न: के तपाइँ अनुकूलित उत्पादनहरू र अनुकूलित प्याकिंग बनाउन सक्नुहुन्छ?
A: हो। हामीसँग व्यावसायिक R&D टोली र वर्षौंको लागि अनुकूलित अनुभव छ। जडानकर्ताहरू वा प्याकिङको बारेमा जतिसुकै विशेष अनुरोध भए पनि, हामीलाई तपाईंको प्राविधिक अनुरोध पठाउनुहोस्, हामी यसलाई तपाईंको लागि वास्तविक बनाउनेछौं!
7) प्रश्न: तपाईं नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? के नमूनाहरू निःशुल्क छन्?
A: हो, हामी बल्क अर्डर अघि गुणस्तर परीक्षणको लागि 3pcs नमूनाहरू निःशुल्क एक पटक समर्थन गर्छौं, तर ढुवानी लागत तिर्न आवश्यक छ।
8) प्रश्न: तपाईंको भुक्तानी अवधि र भुक्तानी तरिका के हो? के म RMB तिर्न सक्छु?
A: हामी TT द्वारा वितरण अघि 100% भुक्तानी समर्थन गर्छौं। सामान्यतया हामी USD मा चार्ज गर्छौं, यदि तपाईं RMB मा गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो पनि स्वागत छ।
9) प्रश्न: तपाईंको डेलिभरी समयको बारेमा के हो?
A: हामी बल्क स्टकको साथ कारखाना हौं, सामान्यतया ढुवानी भुक्तानी प्राप्त भएको3कार्य दिन भित्र व्यवस्थित हुन्छ। यदि स्टक छैन भने, हामी जाँच गर्नेछौं र तपाईंको जानकारी राख्नेछौं।
10) प्रश्न: के तपाइँसँग तपाइँको उत्पादनको गुणस्तरको ग्यारेन्टी छ?
A: हो,3वर्ष ग्यारेन्टी।
11) प्रश्न: के म HYFD जडानकर्ताहरूको एजेन्ट / डिलर बन्न सक्छु?
A: स्वागत छ! तर कृपया मलाई पहिले आफ्नो देश/क्षेत्र थाहा दिनुहोस्, हामी जाँच गर्नेछौं र यस बारे थप कुरा गर्नेछौं। तपाईं कुनै पनि जडान सम्बन्धित सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
हट ट्याग: सौर्य ऊर्जा कनेक्टर, चीन, थोक, खरिद, गुणस्तर, सस्तो, अनुकूलित, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, नि: शुल्क नमूना, उद्धरण, CE, UL,3वर्ष वारेन्टी
सौर्य ऊर्जाको लागि कनेक्टर
ठेगाना: Bldg 25, जिनमिंग औद्योगिक क्षेत्र, DaLang स्ट्रीट, LongHua जिल्ला, ShenZhen, 518109
वाटरप्रूफ स्क्रू कनेक्टर, वाटरप्रूफ केबल कनेक्टर, M6 कनेक्टर वा मूल्य सूची बारे सोधपुछको लागि, कृपया हामीलाई तपाईंको इमेल छोड्नुहोस् र हामी 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा हुनेछौं।
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 ShenZhen HuaYi-FaDa Technology CO., Ltd. - वाटरप्रूफ स्क्रू कनेक्टर - सबै अधिकार सुरक्षित।